Nabad Diid ONLF ah, Ayaa Isa Soo Dhiibay Waa Gaf iyo Colaad Galin Geesiyada Cwxo! – Rasaasa News
Jul 10, 2010 Ayaa Isa Soo Dhiibay Waa Gaf iyo Colaad Galin Geesiyada Cwxo!, Nabad Diid ONLF ah
Warbaahinta Ismaamulka Jijiga, ayaa waxaa ay mar walba soo qoraan erayo xasaasiyad kicin kara oo ka dhan ah heshiisyada iyo wadahadalada nabada ee u dhaxeeya dawlada dhexe iyo Jabhadaha. Qoraalkani waa qoraal dagaal
Waxaa dhab ah oo ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya xusuusan yihiin in masuuliyiinta Ismaamulka Somalidu ayna wax asxaan ah u samaynin xiligii ay socdeen dagaaladii u dhaxeeyey Itobiya iyo Jabhadaha dagaalka ku jiray.
Maanta oo ay dhaceen heshiisyo iyo wadahadalo nabadeed oo u dhaxeeya dawlada dhexe iyo Jabhasdaha ayaa waxaa si cad u muuqata in Masuuliyiinta Ismaamulku ayna waji u haynin nabad ka dhacda dhulka Somalida Ogadeeniya.
Cabashadaas waxaa qaba dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo Jabhadaha nabada qaatay oo iyagu u daneeyey dadweynaha dhibaataysan, si nabad ahna jeclaaday in ay ku raadiyaan xuquuqda dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa laba jibaarmay baa la leeyahay xadhiga ka jira degaanka, gaar ahhana gabalada salka u ah nabada socota. Waxaa kale oo cay iyo afxumo lagu hayaa xubnaha cwxo ee iyagu u dhaga nuglaaday dhawaaqii madaxdooda. Waxaana warfaafinta Ismaamulku ugu yeedhaa cwxo ee ku imanaya amarka madaxdooda Nabad diid iyo budh-cad, waxaana la waydiiyaa su,aalo xun xun sidii maxaabiis dagaal lagu qabtay.
Masuuliyiinta ONLF, ee haatan jooga Itobiya ayaan wali la tusin cwxo ee soo galay oo ay ciidanka New Police-ku ku hayaan meelo gooni ah.
Heshiisyada dawlada dhexe ay ONLF la gaadhay ayaa waxaa ku jiray in cwxo, heshiiska ka dib loo sameeyo xirfado shaqo iyo waliba qaramayn cidii doonaysa. Inta ka horaysa saxiixa nabadana si wanaagsan loo soo dhaweeyo.
Su,aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay ma masuuliyiinta dawlada dhexe ayaa khayaano samaynaya mise Kilalka ayaa ka soo horjeeda wadahadalada nabada.
Hadii, ayna dadweynuhu arag isbadal muuqda iyo soo dhawayn qalbi ah, ayaa waxaa dhab ah in ay dadweynuhu ooda jabin doonaan ayna Jwxo-shiil jeelkiisa noqon doonaan. Arinkaas oo dhabar jab ku noqondoona dadaalka nabada iyo rabitaanka dadweynaha.